Blockchain News 24 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 24, 2018 arun
Grayscale Investments kuti vomurova itsva cryptocurrency mari mashanu 2018
Grayscale Investments, izvo zvakaita kuti zvive nyore zvikuru vanoita kuti bheji musi Bitcoin, anoronga kupa itsva chete-mari crypto mari mana uye mumwe kunobva kubudikidza pakatanga April pamusoro tswanda digitaalinen dzeEurope.
"Pakazosvika rokutanga chikamu gore rino, tichava dzinokwana sere inivhesitimendi zvinogadzirwa,"Grayscale Kushandisa Director Michael Sonnenshein akati bvunzurudzo yebasa Chipiri muna Vancouver.
Grayscale chepakutanga Bitcoin Investment Trust, izvo anorega pamusoro-the-pakaunda muna U.S., haana yakadirana kupfuura 1,300 muzana mugore rapera sezvo masangano vanoita wakakomberedzwa kutenga digitaalinen mari zvakananga asi kutsvaka nezvemidzimu zvavakawana kubva cryptocurrencies.
Sonnenshein vati mari vaizove muronga wakafanana Bitcoin Investment Trust, achipa makambani kukwanisa kuwana kugara digitaalinen dzeEurope kuburikidza kutenga chokumbofanobata.
Sonnenshein akati "motokari iyoyo abate pamusoro zvokunwa digitaalinen dzeEurope, zvichatyisa musika chivharo-weighted, uye mwero iri Quarterly hwaro. "
The New York-kwakavakirwa zvakasimba iri "anochengeta nzeve dzedu yakazarukira chii vanoita kuda kuona,"Sonnenshein akati. "Kana pane dzimwe mari kuti vanoita munokumbirira vedu mamiriro zvigadzirwa kumativi, zvino tinoda kuva ikoko kugutsa kuti vade. "
Trappers Rating sangano okudenha mamakisi ari cryptocurrencies – Bitcoin anowana C +
Trappers Ratings, rudzi tiite akazvimirira Rating sangano mari nemasangano, nhasi anosunungura yomuzana nokusingaperi mamakisi rudzi pamusoro cryptocurrencies achishandisa mari Rating sangano.
Chii chinoita kupinda Trappers 'kupinda cryptocurrency ratings chinokosha kwayo munhoroondo okuzvimirira uye zvakarurama dzimwe inivhesitimendi sectors, sezvakataurwa nomunyori U.S. Government Kuzvidavirira Office (Gao), Barron raMwari, The Wall Street Journal, uye The New York Times, pakati vamwe.
The Trappers Cryptocurrency Ratings vanoongorora mutengo pangozi, mubayiro zvinogona, blockchain Michina, kutora, chibatiso, uye zvimwe zvinhu. "Nokuda nokukurumidza zvachinja date,"Anotsanangura Trappers, "Upgrades uye downgrades vari kakawanda kupfuura dzimwe sectors isu kufukidza."
Bitcoin (yavose sezvavakatarirwa C +) anowana zvakaisvonaka dzakawanda kuti kuchengeteka uye kwakapararira wokugamuchirwa. Asi zviri kusangana chikuru samambure bottlenecks, zvichikonzera sokunonoka uye yakakwirira kwema mari. Pasinei zvikuru kuitwa kuti muri kugona vamwe kutanga kubudirira, Bitcoin haana pakarepo nomazviri nokukurumidza upgrading rayo-software yekubvuma.
Trappers Ratings, rwakatanga 1971, rate 55,000 masangano uye upfumi. Kusiyana Standard & murombo, Moody aiva, Fitch uye A.M. Best, Trappers haana anogamuchira muripo chero mhando kubva masangano nayo chepiri.
Mutsetse ari kupera Bitcoin rutsigiro
Payment processor mutsetse asisiri inotsigira Bitcoin sezvo muripo nzira kutanga April 2018.
Mutsetse vakatanga kubvuma Bitcoin mu 2014 asi ikozvino anotaura Bitcoin kuti kutengeserana mari yechikoro uye vashoma kunonoka nokusimbisa nguva sezvo pfungwa kugumisa ukama dzaro Bitcoin.
hurumende South Korean anoongorora cryptocurrency exchanges’ chibatiso
South Korean Bitcoin exchanges vakanga iongororwe uye hapana vanosangana chibatiso mitemo, maererano hurumende South Korea. Mumwe nomumwe 8 exchanges akaongorora vakanga vakafunga “sakosha” uye kurumbidza zvakagadzirwa kuvandudza kuchengeteka kwavo.
Mitemo New kuchawedzera fines uye akaisa nguva nhungamiro yokuti exchanges izvi kuti ndiwedzere kuti zvinodiwa kana kutarisana zvinobvira kuvhara.
Izvi zvinoratidza hurumende South Korea iri kutora cryptocurrency exchanges zvakakomba uye anokoshesa kuchengeteka.
Digital Currency Auditor Friedman LLP inobvisa zvose inotaura pamusoro Bitfinex kubva Website
Friedman LLP, digital mari wevanoongorora akaunzi basa, Akabvisa chero yapfuura kududzwa Bitfinex somunhu yeGmail.END_STRONG, uye akabvisa yokutombotaura kwadzo nhau zvokudya.
Izvi runouya kufungirana kukura neukama pakati Bitfinex uye tether sezvo USDT (tether zviratidzo) vari yakagadzirwa ne miriyoni ichi svondo rapfuura.
City muna Vermont kushandisa blockchain nyika yokunyoresa zvinyorwa
Guta South Burlington, Vermont, ari trialing nyika kunyoresa hurongwa iyo inoshandisa blockchain sechikamu marongedzero pakunyora uridzi.
The City Zvipikiri Munzeve Hofisi vakazivisa neMuvhuro kuti zvakanga partnering pamwe blockchain startup Propy kuchengeta nyika rekodhi utariri Data, maererano mupepanhau. Mutyairi wacho Chinangwa ndechokuti kuva rikurumidze uye hwakachengeteka ledger kuti zvivako kwema ane mamwe chinangwa kuongorora zvakanaka sei uchishandisa blockchain-inobva papuratifomu kuchaderedza zvichidhura kuchengeta nyika utariri Data kana zvichienzaniswa chinyakare nehurongwa.
South Burlington raMwari City Zvipikiri Munzeve, Donna Kinville, akati guta “anogara kufarira kushandisa zvigadzirwa runogonesa ayo chokuendesa mabasa kuvagari. Isu tazvigadzira kuti kudzidza kubva ichi Propy mutyairi wendege.”
Nordea bhangi dzairambidzwa basa redu vashandi kubva kutengesa Bitcoin
Nordea, munhu Northern mubhengi European kwakavakirwa kubva Finland, akakuudza zvose zvayo 31,500 vashandi havagoni kuchinjanisa Bitcoin.
Nordea achaita kumanikidza kurambidzwa wayo kubva Feb. 28, pashure bhodhi rayo akabvuma kutsigira nokuda "unregulated hunhu" mumusika, mutauriri Afroditi Kellberg akati pafoni neMuvhuro.
"Hazvina kwakapararira tsika mhiri rwezvemabhengi indasitiri kurambidza pachavo nhoroondo yokubata pamusoro pomudonzvo kwakavatadzisa kutora zvinzvimbo dzokufungidzira upfumi, kana izvo zvinogona pachena kuti njodzi kurasikirwa nemari uye saka tinzwe zvavo mari yakamira,"Kellberg akati. Naizvozvo "Nordea, kufanana mabhanga, ane kodzero yokugadza kunze mitemo munzvimbo iyi kuti zvinoshanda vashandi vayo. "
Nordea akati Mutemo waro "zvinosanganisira Transitional urongwa tsvimbo huripo Holdings uye rinobvumira zvimwe kunze." Vashandi vanotova ndorwangu Bitcoin vari "Unotenderwa kuramba huripo Holdings."
Nordea ndiro guru rokutanga European bhengi kumanikidza kurambidzwa yakadaro.
Softfork SeqWit akatora ...
Cryptocurrency itsva ...
Previous Post:Ndiani John Hyman, kana chii chatinoziva pamusoro teregiramu inivhesitimendi chipangamazano
Next Post:Robotrading kana Chinyorwa Trading